Year 1 3 todobaad ka hor #1167 by jopidioot
Year 1 3 todobaad ka hor #1168 by rikoooo
Bisha 1 3 todobaad ka hor #1429 by isela
Marka hore mahad balaaran waad ku mahadsan tihiin wiilasha shaqada adag iyo xirmooyinka cajiibka ah ee aad u haysaan P3Dv4. Waxaan ka booday weyn FSX ilaa P3D dhamaadka sanadkii hore, oo idinku waxaad tihiin qayb badan oo adeegsiga FS cusub ah.
Waxaan si farxad leh uga soo degsaday xirmadaada - Boeing 737 Classic Multi Livery Pack FSX & P3D - iyo marka horeba, wax waliba si fiican ayey u shaqeeyeen iyada oo aan arrimo jirin. Si kastaba ha noqotee, toddobaadyadii la soo dhaafay, wakhti kasta, inta aad ku sugan tahay P3D, Waxaan xiraa mid ka mid ah B737s Classic, P3Dv4 kaliya ayaa gabi ahaanba xiran, qiyaastii 10 seken kadib markii diyaaradda ay xamuul oo ay shaashadda kasoo muuqato… faham wixii isbedelay. Waxaan dib-u-soo dejiyey nooca aad cusboonaysiisay ee xirmada ............. laakiin wali dhibaatada ayaa leh dhammaan diyaaradaha 737.
Ma jiraan wax soo jeedin ah oo aad iga caawin karto? Codsiyada su'aasha mudada dheer ...
Bisha 1 2 todobaad ka hor #1433 by isela